Kabinetra biosafety & mpanamboatra efitrano madio - kabinetra biosafety sy mpamatsy efitrano madio & orinasa
ZR-1013 tester kalitao Biosafety
ZR-2021 Sampona mikraoba mikoriana mikraoba dia ampiharina amin'ny fanangonana mikraoba mandeha amin'ny rivotra. Ny vokatra dia miaraka amina dingana maromaro amin'ny lohan'ny santionany, afaka manangona aerosol ary manaisotra ireo sombiny lehibe mihoatra ny 12 μm ary kely kokoa noho ny 2 μm toy ny vovoka, vovobony sns. Angony ny sombin-tsakafo tsy azo tsofina eo anelanelan'ny 2μm ka hatramin'ny 12 μm ary mifantoha amin'ny fikorianan'ny rivotra kely, avy eo manangona amin'ny alàlan'ny porton sampler.
ZR-2050A Sampana mikraoba mandeha amin'ny rivotra
ZR-2050A mikraoba mikraoba azo avy amin'ny rivotra dia avo lenta avo lenta avo lenta avo lenta avo lenta, ity fitaovana ity dia miorina amin'ny fitsipika miantraika amin'ny Anderson, 10,8 m / s ny hafainganam-pandehany, mety hahatratra ny poti rehetra lehibe kokoa noho ny 1 1m. Ity fitaovana ity dia hisarika ny rivotra amin'ny alàlan'ny lohan'ny santionany aperture marobe, ny fiatraikany amin'ny lovia ri90mm petri, ny mikraoba entin'ny rivotra dia ho voasambotra amin'ny medium agar. Ity fitaovana ity dia ampiharina betsaka amin'ny indostrian'ny pharmaceutika, indostrian'ny sakafo, institiota fizahana zava-mahadomelina, ivon-toerana fanaraha-maso aretina, fisorohana ny fahasalamana sy ny valanaretina, hopitaly sy indostria ary departemanta mifandraika amin'izany